Tofu ine sauteed howa uye mbatata yakabikwa | Kicheni Mapepa
Maria vazquez | 28/08/2021 10:00 | Mapepa ane Mushroom
Anenge vhiki imwe neimwe ndinofamba nechikepe a yakasimba tofu block Uye ndinoishandisa, mushure mezvo, kugadzirira ndiro dzakasiyana kwemazuva maviri akateedzana. Tofu ine sautéed howa uye mbatatisi yakabikwa inongova imwe yemazano mazhinji aunogona kugadzirira zviri nyore uye nekukurumidza. Iwe unoda kuziva kuti ungazviita sei?
Kwandiri marinate the tofu kiyi kuti iwane kuravira. Unogona kuzviita uchishandisa zvinonhuwira zvaunoda zvakanyanya. Zvangu zvandinoda paprika uye oregano, asi iwe unogona kushandisa mukuwedzera kana panzvimbo peaya turmeric, kumini kana curry, wadii! Zvese zvinhu inyaya yekuyedza.
Kamwe iyo tofu yanyoroveswa uye yakabikwa iwe unongofanirwa kuisanganisa nayo sauteed howa, mbatatisi yakabikwa uye mamwe macheri kuva neresipi iyi yakagadzirira. Asi iwe unofungei kana isu tikaenda nhanho nhanho? Kubva kune tofu marinade kusvika kune yekupedzisira kupfeka. Cherekedza uye enda kumberi uye gadzira iyi recipe ive yakapusa uye inobatsira.
Iyo tofu ine sautéed howa uye mbatatisi yakabikwa yatinogadzirira nhasi iri nyore, inokurumidza uye vegan recipe. Yakanaka kunakirwa nemhuri.
Kune iyo tofu
250 ml. yemvura
½ teaspoon yepaprika inopisa
4 madiki matapiri
250 g. howa
½ teaspoon gariki upfu
½ teaspoon yakaoma parsley
8 cherry madomasi
Tinobika mbatatisi mumvura ine munyu; kana ari madiki, anotora angangoita maminetsi makumi matatu kuti abike.
Tinotora nguva ku gadzirira iyo tofu. Kuti tiite izvi, tinoisa mvura, zvinonhuwira uye diced tofu mupani. Kana wapedza, pisa pamusoro pekupisa kwepakati, kufukidza uye rega iyo tofu ibike kwemaminitsi masere. Mushure mezvo, tinozarura uye tinobika pamusoro wepakati-wakanyanya kupisa kusvikira mvura yapwa.
Mushure, tinodurura mafuta uye songa kwemaminetsi masere kuitira kuti tofu isvibise. Kuti upedze, wedzera muto we soy, sanganisa uye gadzira iyo yese kwemaminetsi maviri. Takabooker.
Parizvino mbatatisi idzi dzinogona kunge dzakabikwa. Kana zvirizvo, tinovaburitsa kunze kwemvura, svinura uye tomirira kuti vadziyirwe kuti vavasvuure.
Takamirira, tinosvina howa. Isu tinoisa mapunipuni maviri emafuta mupani yekutsvaira uye kana kuchipisa, tinowedzera howa uye tinosvibisa kune rimwe divi, tobva taisa munyu uye mhiripiri, tinowedzera hupfu hwegarlic neparsley uye tinozvidzorera ku bika ivo kwemumwe miniti.
Kana zvese zvinoshandiswa zvagadzirwa, isu tinongofanirwa kusanganisa iyo tofu, mbatatisi uye howa unopisa mundiro kana mundiro uye wobva wawedzera madomasi echeri kuti unakirwe neiyi tofu nehowa hwakabikwa uye mbatatisi yakabikwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Mapepa ane Mushroom » Tofu ine sautéed howa uye mbatatisi yakabikwa